Shirkada Telesom Oo Wada Qorshe Dabar Jaridoona Isticmaalka Lacagta Kaashka Ah Ee S/land | Marsa News
Shirkada Telesom Oo Wada Qorshe Dabar Jaridoona Isticmaalka Lacagta Kaashka Ah Ee S/land
October 1, 2019 - Written by editor marsan
Hargaisa:(Marsanews) Tiyo hore ba aynu la wada soconay saamaynta taban ee adeega lacagaha laysugu diro telifonku ay ku yeeshen qiimaha lacagta somaliland, ayaa hadana ay jiraan xogo aanu ka helnay shaqsiyaad u dhuun daloola ama la socda dhaqdhaqaaqyada shirkada isgaadhsiinta telesom iyo hawlaha ay ku mashquulsan tahay mudooyinkan danbe.
Ilo xogogaala ayaa shabakada wararka ee Marsanews.com u xaqiijiyay in shirkada telesom ay bilawday qorshe shaqaalaha dawlada mushaharkooda loogu diri doono Zaad, meeshana ay ka bixi doonto shaqaalihii mushaharka doonan jiray oo telifonkiisa loogu soo ridi doono, taasi oo meesha ka saaraysa, lacagtii banka laga soo qaadayay ee shaqaalaha la siin jiray oo haatan isu badali doonta lacagtaa telifonka loogu soo ridayo.
Ilo wareedada arintan sida dhaw ula socday waxay soo warinayaan inay bilaabantay diwaan galinta shaqaalaha dawlada ee isticmaala adeega Zaad si bisha soo socota loogu diro telifonkooga oo aanay imanin goobihii ay mushahaarada ka qaadan jireen, waxa intaas ay wararku ku sii darayaan in shaqaalaha wasaarada maaliyada laga bilaabi doono sidaana lagu wada gaadhsiin doono guud ahaan shaqaale waynaha dalka oo dhan.
Waxa hadaba iswaydiintu tahay isbadalka guud ee dhaqaale ee arintani ay keeni kartaa noocee ayuu noqonayaa.
Dabcan sida ay sheegayaan khuburada ku xeesha dheer arimaha dhaqaalaha, waxa ay guud ahaan ba meesha ka saari doonta arintani shilinkii somaliland ama aan si kale u nidhaahnee lacagtii kaashka ahayd ee somaliland ee suuqa wax lagaga iibsan jiray, taas oo dalka ku keeni karta inay timaado khatar dhaqaale oo uuna ka soo waaqsanin.
Waxa iyana xusid mudan sida ay suurtagal u noqon karto isla xisaabtanka shaqaalaha iyo xukuumada oo lagaba yaabo in qaladaad madbici ahi uu dhici karo islamarkaana ay iman karto duudsi ku dhaca xaqii iyo xuquuqdii shaqaalahan, markiisa horaba ku nool mushaharka yar ee uu nolosha kula tacaalo.
Telesom damaca mashruuca noocan oo kale ah marka ay la timaado tiyoo hore ay u curyaamisay adeegyo badan oo aasaasi ahaa islamarkaana ay hawada ka saartay dad badan oo shaqooyin ay qaban jireen ay haatan iyadu qabato kadibna ay noqdeen dadkaasi kuwo camal beelay, haatana ay markale halkii u danbaysay ay soo hunguraysay oo ah in shaqaalihii dawlada ay mushaharkoodii tidhaa anaa idin soo diraya oo Zaadka ayaa laydiin soo marinayaa, sidee ayay noqonaysaa dabciga iyo hunguriga intaa leeg yaase u suurta galinaya ee u fulinaya?
Telesom hore ayay shaqadii warbaahinta dalku ay qaban lahayd ee ay dhaqaalaha ka heli lahayd ay iyadu u wada qaadatay oo ay hawada ka saartay warbaahintii iyadoon haysan liisan warbaahineed islamarkaana ay adeegeeda isgaadhsiineed u isticmaashay tabaintii wararka, xayaysiisyadii, ogaysiiskii iyo waliba fariimihii guud ahaantood ba ay warbaahintu ka heli jirtay dhaqaalaha kooban, taas oo telesom iyadu u wada gacan gashay.
Dhanka kale Telesom waxay si badheedha hawada uga saartay sariflayaashii bacadka la fadhiyi jiray sarifka si ay uga helaan nolol-maalmeedkooda lacagahaasi ay kala badalayaan, waxaanay samaysay in adeegeeda isgaadhsiineed ee telefonka dhexdiisa ay ka samaysay sarifle lacagta kuugu jirta aad kaga dhex badalanayso taasi oo iyana kumanaan sariflayaala suuqa ka fadhiisisay.
Dhanka iyo Tagsiga ama gaadiidka la raaco
Dhawaan ayay ahayd markii ay samaysay telesom adeeg ay ugu magac-dartay dhaweeye, kaasi oo isna galaaftay tagaasidii yaryarayd ee dhalinyarada faraha badan ka xoogsan jireen, kadib markii telesom adeegeeda isgaadhsiineed ay ka dhexsamaysay adeegan dhaweeyaha oo ay u sahlayso isticmaalka telifonka oo isaga halka aad joogto telesom kugu so hagayso tagsigii aad raaci lahayd.
Aan hadaba iswaydiino Telesom waxa ay umadan uga tagtay ee laga shaqaysan karayo, waatan oo ilaa mushaharkii shaqaalaha ayay maraysaaye, ku darsoo waliba waxaan iyana la hilmaami karin dalka in aanay jirin wax mashaariico horumarineed ah oo shirkadaasi ay ka fulisay amaba qorshaha ugu jira hada garoo dalkii oo dhana adeegyadii laga qabanayay iyaday u wada gacan galeene.